प्रदेश–२ Archives - Page 32 of 33 - Vision Online News
१३ औं दक्षिण एसियली खेलकुद (साग)को उद्घाटन समारोह(तस्बिर सहित)
काठमांडौ, मंसिर १६ । २० वर्षपछि जन्मभूमि फर्किएको दक्षिण एसियाली खेलकुदको सबभन्दा ठूलो मेलाको सम्माननिय राष्ट्रपति बिध्यादेवी भण्डारीद्वारा खेलको उद्घाटन गर्दै हीजोबाट औपचारिक सुरुआत भएको छ। सन् १९८४ मा नेपालबाटै सुरु भएको तत्कालीन दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ) नेपालमा भएको यो तेस्रो पटक हो। य...
छिन्नमस्तामा राजपा उम्मेदवार विजयी, सीके राउतको पार्टीलाइ ११ भोट
सप्तरी, मंसिर १४। सप्तरीको छिन्नमस्ता– वडा नम्बर ७ मा राजपाकी प्रमिलादेवी यादव विजयी भएकी छिन । राजपाकी यादवले नेकपाका उम्मेदवार अक्षयलाल यादवलाई ११ मतले पराजित गरेकी हुन् । प्रमिलाले ५४० मत प्राप्त गर्दा नेकपाका अक्षयले ५२९ मत प्राप्त गरेका छन् । छिन्नमस्ता–७ मा राजपा र समाजवादी पार्टीले गठबन्धन बनाए...
समाजबादी पार्टीले पनि खाता खोल्यो, सर्लाही हरिपूर्वा-१ मा समाजवादी पार्टी विजयी
सर्लाही, मंसिर १४। सर्लाही हरिपूर्वा वडा नं. १ मा आज भएको उपनिर्वाचनमा समाजवादी पार्टी नेपालले विजयी हासिल गरेको छ। समाजवादीका उम्मेदवार श्यामबाबु रायले राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी राम विश्वास रायलाई पराजित गरेका हुन्। श्यामबाबुले कुल खसेको मत १० सय ९३ मा ३ सय ४७ मत ल्याएका छन् भने रामविश्वास...
दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, मंसिर ५ । आगामी मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र धनुषामा १३औं साग प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । सोही १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताका क्रममा त्रुटीरहित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार गृह म...
आलमआतंक जेल पठाउने आदेश दिनासाथ न्यायाधीश र सरकारी वकिलले जिल्लानै छाडे
काठमाडौं , कार्तिक ३० । आफैले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने मोहम्मद अफ्ताब आलमको आतंक कुन हदसम्म छ ? १२ वर्षपछि उनलाई जेल पठाउने न्यायाधीशको मनस्थितिले यो बयान गर्छ । पुर्पक्षका लागि आलमलाई जेल पठाउने न्यायाधीश दीपक ढकालले रौतहटबाट आफूलाई तत्काल सरुवा गर्न न्यायपरिषद...
भ्रमण बर्ष २०२० को प्रचारप्रसार तीब्र, यातायात व्यवसायीको एक्यबद्धता
काठमांडौ, कार्तिक २८ । महत्वपूर्ण कदमको रूपमा आजदेखि नेपालमा सन्चालित करिब तीन लाख सार्वजनिक सवारी सधानहरु नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को प्रचार सामाग्रीद्वारा सजिने भएको छन् । स्टीकर र लोगो आज यातायात ब्यबसायीहरुलाई बितरण गरेर शुभारम्भ गरिएको संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रि योगेश भट्टराईले ...